DF Soomaaliya & Hay’adda IMF oo heshiis muhiim ah gaaray – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DF Soomaaliya & Hay’adda IMF oo heshiis muhiim ah gaaray
May 20, 2022 Xuseen 4
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hey’adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa gaaray heshiis muhiim ah oo ku saabsan geeddi socodka DeynCafinta iyo dib-u-eegista Wajiyada 2aad iyo 3aad Barnaamijka ECF ee dib-u-habeynta hannaanka Maaliyadda iyo Horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya.
J Hashim says:
Well done Dr Bayle
Somalia waa dalqania heshiiya ka xorrooba deenyn iyo baryada carbta maskaxada ka shaqaya Somalaay dameer malabsida hanoqonina
Saxaafadda waajib aasaasi ah ayaa ka saaran inay shacabweynaha arrimaha noocan ah kajaahilbixiso oo sida ay wax yihiinna ugu sheegto.
Meeshan heshiis gaar ah lama gaarin oo deynna dalka laga macafinin. Waxaa jira go’aan ay IMF sanad iyo hilaadahaas kahore qaadday oo ilaa 28 waddamood oo dunida ugu sab’oolsan lagaga takhfiifinayo ribada dulsaarka ku ah deymaha ay IMF ka qabaan.
Deyntu waa sideedii, laakiin dulsaarkii baa ama laga dhimay amase bixintiisa dib loogu dhigay. Waxaana xisaabta kujirta qaanta xubinnimo ee Soomaaliya kaga aaddan IMF.
Sidaas oo ay tahayse, dowladda “cusub” weli lamaba dhaarinin e igmasha uu wasiirkan sii ambaxaya u leeyahay inuu heshiisyo caalami ah saxiixo waa mid maxay kusaleysan?
Sideedana, hadafyada IMF iyo World Bank ee aasaasiga ah waxaa kamid ah (waa sida ay ku andacoodaan e) inay waddamada uu dhaqaalaha guud dhabaq xun kaga dhaco ladhisaan qorshe dhaqaale oo qaladaadka dhacay ‘dib loogu saxayo’.
Xaqiiqaduse waxay tahay in qorshahaas loo dejiyo hab farsameysan oo dalka dhabaqu ku dhacay culayska lagu saarayo laakiinse labadan huwaabood deymahooda (raasumaalkooda) iyo ribada (faa’iidadooda) dulsaarka ku ah lagu ilaashanayo.
Waana qorshaha halaagga ah ee ay SAP (Structural Adjustment Programme) ugu magacdareen oo siddeetamaadkii ilaa shaagashamaadkii qaaradda Afrika sida ba’an u curyaamiyay oo kuwo badan oo ay Soomaaliya kamid tahayna la burbureen.
Waxaana musiibadii ka dhalatay sawirkeeda sifiican u naqshadeeyay heestii ahayd “Laangaruusar Gado” ee ay Saado Cali kuluqeysay.